I-intanethi yekhasino okanye ekhasino kwi-intanethi, ngaphandle kokushiya ikhaya
Ikhasino ye-Intanethi, kutheni iye yathandwa kangaka? Imidlalo yokungcakaza yokuqala yenziwa phaya kwinkulungwane ye-17. I-Roulette, ipoker kunye neminye imidlalo yamakhadi eyayibekiwe kunokwenzeka, ukwazisa iingcebiso nge-adrenaline kunye nezixa zemali ekufuneka zidlalwe.
Namhlanje, ukungcakaza akunxulunyaniswa nomngcipheko nemali kuphela, kodwa kunye neekhasino ezikwi-Intanethi. Iikhasino zokuqala zasekwa ngenkulungwane ye-1842 eYurophu, ngakumbi eFrance. KwakuseMonaco ngo-XNUMX apho kwenziwa i-roulette yaseYurophu, eyatsala izihlwele zabadlali abazimiseleyo nabazizityebi. Umkhwa wekhasino usasazeka ngokukhawuleza kwamanye amazwekazi-ngakumbi e-USA, apho uninzi lweekhasino zisekhona namhlanje. Apha singakhankanya odumileyo Las Vegas - isixeko esiyintlango esilikomkhulu lokungcakaza. Nangona kunjalo, ngaphezulu kweshumi elinababini leminyaka, iikhasino ezisekwe kumhlaba ziye zalahlekelwa kukuthandwa ngenxa yento entsha. Iikhasino ezikwi-Intanethi zingene kumdlalo kwaye ziyaphuma njengamakhowa.
Iikhasino zokuqala ezikwi-Intanethi
Sele ngo-2000, iikhasino zokuqala zenziwa kwi-Intanethi, ezatsala umdla wabasebenzisi be-Intanethi. Ngokuphuhliswa kwe-Intanethi, kwavela izinto ezintsha ezisuka kwihlabathi lokwenyani zisiya kwilizwe lokwenyani. Uphuhliso ligqithile kulindelo lomntu wonke - namhlanje lihlabathi elikwi-intanethi elichaza iimeko. Akukho kwahluka ngokungcakaza, iikhasino ze-intanethi zibonelela ngokulula kunye namathuba amaninzi kunamakhasino asekwe kumhlaba.
Nasi isizathu sokuba usebenzise ikhasino ekwi-Intanethi:
Ukuthuthuzela - njengoko sele sitshilo, singadlala i-poker okanye i-roulette ngelixa sihleli kwisitulo sasekhaya esihle.
Ukufumaneka -ayinamsebenzi ukuba sihlala phi - iikhasino ezikwi-intanethi ziyafumaneka kuye nabani na ongena kwi-intanethi. Oku kukudibanisa okukhulu kuthi, iipolisi ezingenazo iikhasino ezininzi ePoland (umthetho uyakwalela ngokufanelekileyo ukwakha iikhasino ezintsha). Isisisombululo esifanelekileyo kwabo bahlala kwiidolophu ezincinci kwaye abanakho ukufikelela kwizixeko ezikhulu ezinekhasino. Emva kwayo yonke loo nto, wonke umntu omdala unelungelo lokuphumla ekhasino, kodwa ngaphandle kokuthatha uhambo olude oluya emiqolombeni yokungcakaza. Yile nto inika i-casino kwi-intanethi.
• Imidlalo emininzi -Masijongane nayo-Amakhasino asePoland awayiyo inkokheli ngokubakho kwesibonelelo kunye nohlobo lwemidlalo. Nangona kwikhasino eqhelekileyo sinokuthembela kumdlalo omnyama weJack, i-roulette okanye oomatshini bokufaka, kodwa nalapho inani labo alothusi.
• Akukho zithintelo kwezemali kunye nokulungisa ukuthengiswa okukhawulezileyo -ngombulelo kwiindlela ezininzi zokuhlawula, akukho mfuneko yokuba sibe nesixhaso esikhulu semali ezandleni zethu. Ufuna kuphela ugqithiselo olunye kwiakhawunti yakho ukuze udlale kwikhasino ekwi-intanethi.
Iibhonasi kunye nokunikezelwa okhethekileyo - yaku rhoqo ukunqanda iibhonasi okanye i-spins yasimahla. Ngokuchasene noko, i-casino ekhompyutheni imema abadlali, iphindwe kabini iidiphozithi zabo, kwaye iququzelele izibonelelo ezikhethekileyo- ungabona ukuba ukungcakaza kwi-Intanethi kuyile ngakumbi kwaye ayisiyiyo imeko yokungcakaza kuphela.
Ukuphela kwecala leekhasino ezikwi-intanethi kukusilela komoya ohlukileyo kule meko. Wonke umntu okwaziyo ukufikelela koku kunye (kunye nesininzi) khetha i-Casinos ezikwi-Intanethi.